Akụkọ - Otu esi ahazi ihe eji arụ ọrụ hydraulic
N'ezie, hydraulic cylinder bụ akụkụ dị mkpa nke akụrụngwa igwe. Okwesiri iru ihe ndi choro, oria, oghere ntinye na oke ntinye nke akụrụngwa niile. Ọdịdị kọmpụta pụrụ iche nke igwe ihe eji arụ ọrụ, njedebe nke cylinder siri ike.
Mgbe ị chọpụtịrị njigide (ịdọrọ ike), ọrịa strok, ọsọ ọsọ na ọnọdụ nrụnye nke cylinder mmanụ, nrụpụta e gosiri na ogo nke mgbapụta mmanụ isi, a na-ekpebi nrụgide na ntinye nke cylinder mmanụ, na ntanetị dị n'ime mmanụ cylinder kpebisiri ike. Ọsọ na nkedo dị n'ime nke cylinder mmanụ na-ekpebi ọnụọgụ mmanụ mmanụ.
Ọ bụrụ na ị maara dayameta dị n'ime, nrụgide ọrụ, ọrịa strok na ọnọdụ njikọ nke cylinder mmanụ, ị nwere ike ịhọrọ ụdị. Enwere ụkpụrụ mba maka cylinder mmanụ, a na-akpọkwa ụdị a na-akpọkarị cylinder.
Dịka ọmụmaatụ, dị ka ntinye nke 4 tọn, enwere ike gbakọọ na ọ bụrụ na e mere atụmatụ Bai nke cylinder mmanụ ka ọ bụrụ 8Mpa, eriri nke dị n'ime mmanụ ahụ bụ 80, na ihe atụ nke mmanụ ahụ bụ 80 * 40 * 300-8mpa. Enwere ike iji ụdị mkpụrụ osisi ahụ mee ihe na ọnụ ala dị ala na mmezi dị mma .Ọ bụrụ na nrụgide ọrụ nke mmanụ mmanụ bụ 16MPa, eriri dị n'ime nke mmanụ ahụ bụ 60, na ihe atụ nke mmanụ ahụ bụ 60 * 35 * 300-16mpa , na ụdị ịgbado ọkụ ma ọ bụ ụdị mkpịsị aka nwere ike iji mee ihe.Ọ na-atụ aro ka ị jikọta nrụgide usoro nke akụrụngwa akụrụngwa iji chọpụta nrụgide ọrụ nke cylinder mmanụ na mbụ. Ọ bụrụ na akụrụngwa akụrụngwa agwụla, nrụgide sistemụ kwesịrị ịdị ala, nke na-erughị 5MPa. Ọ bụrụ na akụrụngwa igwe na-arụ ọrụ siri ike, nrụgide sistemụ kwesịrị ịdị elu
Agbanyeghị, ụkpụrụ nke silinda mmanụ dị ọtụtụ na enweghị nsogbu, gụnyere ụkpụrụ mba, ụkpụrụ nke Ministry of machinery, na ụkpụrụ ụlọ ọrụ dị iche iche. Mkpụrụ vaịn ahụ, akara, njikọ na usoro nnwale nke cylinder mmanụ nwere ụkpụrụ nke ha. Zọ kachasị mma bụ ịbịaru ụlọ ọrụ.